Waxbarashada aasaasiga ah - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Waxbarashada aasaasiga ah
Dhammaan carruurta joogta Finland waxay dhigtaan dugsi, sababtoo ah sharciga ayaa qaba in carruurta oo dhan ay helaan waxbarashada aasaasiga ah. Macallimiintu waxay qabaan waxbarasho sare, waxbarashada dugsiyada oo dhanna waa mid tayo leh.
Inta badan carruurta iyo dhallinyaradu waxay waxbarashada aasaasiga ah ku qaataan dugsiyada hoose-dhexe. Cunuggu wuxuu inta badan dugsiga billaabaa sannadka uu 7 sano buuxiyo. Sida caadiga ah dugsiga hoose-dhexe wuxuu qaataa 9 sannadood. Dugsiga hoose-dhexe waa u lacag la’aan dadka oo dhan.
Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka soo-galootiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Cunug jirran ma aadi karo xannaanada ama dugsiga. Cunuggu waa in uu guriga joogaa xittaa haddii calaamada ka muuqdaa ay yihiin kuwa khafiif ah.
Gee cunugga baaritaanka Koronaha, haddii aad ogtahay in uu Korona u dagmay. Waxaa kale oo wanaagsan in baaritaanka Koronaha la sameeyo haddii ay qoyska ka mid yihiin dad halis ugu jira in ay uu Korona ku dhaco, tusaale ahaan dad 16 sano ka weyn oo aan tallaalka qaadan. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegga Omaolo, rugtaada caafimaadka ama lambarka heeganka oo ah 116 117.
Waalidiinta ayaa iskuulka soo ogeysiinaya cunugooda. Degmada ayaa sanadka bilowgiisa u diraysaa guryaha ogeysiiska waajibka waxbarashada (oppivelvollisuusilmoitus). Waxaa ogeysiiskaas ku calaamadeysay iskuulka ugu dhow (lähikoulu). Iskuulka inta badan guriga ugu dhow. Waalidku waxay u dooran karaan cunugooda karaa iskuul kale oo aan aheyn kan u dhow. Waa suurogal inaan mar walba laga helin boos iskuulada kale.
Ogeysiiska iskuulka kuu dhow ee cunugaada waad sameyn kartaa. Degmooyinka qaarkood waxaad ogeysiiska ka sameyn kartaa internetka. Waqtiga ogeysiintu waa bilowga sanadka, inta badan bisha Janaayo.
Dugsiyada luqada ingiriiska iyo waxbarashada luqado kala duduwan lagu qaato
Magaalooyinka waaweyn waa ku yaal dugsiyu caalami ah iyo dugsiyo luqada wax looga bartaa ay tahay ingiriis. Waxaa kale oo Finland ku yaal dugsiyaal kale oo luqada wax looga bartaa ay tahay jarmalka, farasniiska ama ruushka.
Macluumaadka dugsiyadan ku saabsan waxaad inta badan ka heleysaa bogagga shabakadaha magaalooyinka.
Fasalada gaarka ah
Cunuggu wuxuu sidoo kale aadi karaa iskuul arrin gaar ah ku takhasusay. Mararka qaar iskuulaadkan waa kuwa gaar loo leeyahay. Iskuulku wuxuu ku takhasusi karaa tusaale ahaan arrimaha soo socda:
waxbarashada gaar ah (waxbarashada Steiner)
Macluumaadka Iskuulaadka SteinerFinnish | Ingiriis
Waxbarashada iyo maalinta iskuulka
Iskuulku wuxuu bilowdaa bisha Agoosta wuxuuna dhamaadaa dhamaadka bisha Maajo ama bilowga bisha, Juun iyo Luulyo waa fasaxa xagaaga.
Dhirirka maalmaha iskuulku waa kuwa kala duduwan. Maalmaha fasalada hoose waa ka gaaban yihiin maalmaha fasalada dhexe. Casharadu waxay inta badan qaataan 45 daqiiqo. Todobaadka iskuulku waa qiyaastii 20 cashar saacadeed.
Carruurtu waxay iskuulka ku cunaan hal cunto oo kulul. Waa lacag la’aan. Haddii cunugaadu cuntooyin gaar ah cuno u sheeg macalimada.
Carruurtu waxay ku bartaan dugsiga aasaasiga ah maadooyin badan oo qasab ah. Fasalada ugu dambeeya ee dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waxay sidoo kale dooran karaan maadooyinka la doorto.
Cunug kasta wuxuu iskuulkiisa ku heli karaa barashada diintiisa ama falsafada. Barashada diinta waa in la qabanqaabiyaa marka ugu yaraan sadex cunug oo isku diin ah ay joogaan degmada.
Iskuulaadka qaarkood waxaa ku yaal fasalo gaar u ah ardayda aadka ugu fiican tusaale ahaan farshaxanka iyo sawir gacmeedka loogu talagalay. Inta badan fasaladan waxaa loo codsadaa si gaar ah.
Dugsiga aasaasiga ah iyo dadka dalka u soo guuray
Cunugga ama da'yarku wuxuu waxbarashada aasaasiga ah u heli karaa waxbarasho diyaarin ah, taasoo inta uu ku jiro uu baranayo luqada finnishka (ama iswidishka) iyo maadooyin kale. Waxbarashada diyaarinta ah waxaa loogu talagalay dhamaan carruurta dalka u soo guurtay oo aqoontoodu aysan weli ku filnayn wax ku barashada kooxda waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada diyaarinta ah waxay inta badan qaadataa sanad. Markaas kadib ardaygu wuxuu u wareegayaa fasalka caadiga ah.
Haddii cunuga afkiisa hooyo uusan aheyn Finnish ama Iswidish, degmadu way u qabanqaabin kartaa barashada afkiisa hooyo. Markaas wuxuu luqada Finnishka ama Isiwidishka u baran karaa sidii luqad labaad oo kale, Finnishka sidii luqad labaad (S2-kieli). Ardaygu wuxuu luqada finnishka (ama iswidishka) u baranayaa sidii luqad labaad haddii aysan aqoontiisa luqada finnishka ama iswidishku aysan aheyn heerka afka hooyo.
Dugsiyada sare ee dadka waaweyn waxay dadka qaangaarka ah ee dalka u soo guuray u qabanqaabiyaan waxbarshada aasaasiga ah, dadkaas oo aan shahaadada dugsiga dhexe aan ka soo qaadan dalkooda. Faahfaahin dheeraad ah weydii adeegyada latalinta ee degmadaada ama dugsiga sare ee dadka waaweyn ee kuugu dhow. Macluumaadyda xiriirka ee dugsiyada sare ee dadka waaweyn waxaa laga raadsan karaa mashiinada wax raadinta ee internetka.
Macluumaadka waxbarashada aasaasiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Farriimaha u dhexeeya guriga iyo dugsiga
Degmooyin badan waxey dugsiyadu arrimaha muhiimka ah ku soo gudbiyaan adeegga Wilma oo shabakadda ku shaqeeya. Dugsiga ayaa waalidka cunugga siiya aqoonsiyada lagu galo adeegga. Adigoo Wilmada isticmaalaya ayaa waxaad la xiriiri kartaa macallimiinta, waxaadna macluumaad ka heli kartaa waxbarashada cunugga, imtixaanaada iyo maqnaanshada iyo weliba dhacdooyinka iyo fasaxyada dugsiga. Haddii uu cunugaadu ka maqan yahay dugsiga tusaale ahaan jirro darteed, dugsiga u soo sheeg subaxdi adigoo isticmaalaya Wilma.
Waa muhiim in Wilmada si joogto ah loola socdo. Haddii aad isticmaalka Wilmada u baahan tahay in lagaa caawiyo, dugsiga ka codso hagitaan.
Magaalada Kerava ayaa waxey soo daabacday tilmaamo ku saabsan isticmaalka Wilmada oo luqado kala duduwan ku qoran. Ogsoonow in cinwaanada laga galo wilmada ay ku kala duwan yihiin magaalooyinka.
Sidan ayaad Wilmada u isticmaaleysaa(pdf, 239 kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Turki | Carabi | Kurdish | Tayland | Fietnaam
Fiidadka kulanka waalidka
Dugsiyada ayaa Finland waxay waalidiinta ardayda u qabanqaabiyaan fiidadka kulanka waalidka oo wadajir ah. Waalidiinta oo dhan ayaa loogu talaggalay. Fiidadka kulanka waalidiinta waxaad ku baranaysaa dugsiga, macallinka iyo waalidiinta kale. Waxaad kale oo aad heleysaa macluumaad ku saabsan dugsi-dhigashada cunuggaada iyo waxyaabaha dugsiga dhaca. Marka aad ogtahay waxbarashada cunuggaada iyo arrimaha dugsiga, waxaad awooddaa in aad si fiican u caawiso una taageerto cunuggaada.
Kaalmada waxbarashada iyo fasalka tobanaad
Ardayada dugsiyada aasaasiga ah waxay kaalmo u heli karaan waxbarashadooda. La-taliyayaasha waxbarashada ayaa sheegaya qaababka waxbarasho ee kala duduwan iyo waxbarashada sii-socota. Waxay sidoo kale bixinayaan hagitaan la xiriira kala doorashada xirfadaha.
Cilmu-nafsi yaqaanada waxbarashada iyo kuraatoriga iskuulka ayaa caawimaad looga helaa marxaladaha dhibaatada leh. Macalimadu waxay cunuga siin kartaa kaalmo waxbarasho oo waqti gaaban ah.
Cunugu wuxuu helayaa waxbarasho gaar ah haddii uu dhib ku qabo waxbarashada ama xoog saarida waxbarashada. Kooxaha waxbarashada gaarka ah waa ka yar yihiin fasalada caadiga ah.
Macalimiinta waxay la xiriiraan waalidiinta. Waxay qabanqaabiyaan kulamo ay la qaadanayaan waalidiinta, waxayna u sheegaan waalidiinta waxbarashada cunugooda. Iskuulaad badan waxay waalidiinta kula xiriiraan adeegyada shabakadda.
Iskuulaadka waxaa kale oo laga heli karaa waxbarasho dheeraad ah, waa kuwa loogu yeero fasalka tobanaad (kymppiluokka). Waxay fasaladaas ardaydu sare ugu qaadaan dhibcohooda, sidoo kale waxay uga fekeraan waxyaabaha waxbarashada ahaan xiisa-geliya.
Waxaad codsan kartaa fasalka tobanaad marka aad hesho shahaado dugsiga dhexe ama aasaasiga ah. Fasalka tobanaad wuxuu inta badan qaataa hal sano.
Macluumaadka fasalka tobanaadFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 01.10.2021 Boggan war-celin ka soo dir